Runta, Runtanews, Somali and African news service | Category Archive | Editorial
Geel Maxaas Indho-Kuul ka Kasaa!
Posted on 09 February 2016 by admin
Kacaankii 21ka Oktoobar sannad kasta dalka waxbuu ku soo dhin jiray. Mashaariic badan baa xariga laga jari jaray. Dhaqaalaha imika dalka soo gala mid u dhow laguma riyoon jirin. Golihii shacabka oo lagu dacaayadeyn jiray “shimibiroyahow heesa” weligood codkooda ma iibsan. Mushaharkoodana 100 doolar ma dhameyn. Soomaali sharaf bay ku nooleyd. Cid la yiraahdo “beesha caalamka” ismaynaan aqoon. Xabashi iyo Kenyaati warkooda iskaba daa. Waxaas baa la yiraahdaa, “kud ka guur oo qanjo u guur”. Soomaali waa shacab maanka looga xaday Qabyaalad oo koodii waxtar ahba farta loogu fiiqo laguna yiraahdo “waxba ha ka maqal waa reer hebel”. In mid qoladooda ah uu kursiga ugu fadhiyo ayaa deeqda si kasta oo ay hurdadiisa u badan tahay ama waxtarkiisana u yar yahay. Soomaaliya sidaas bay sanooyin badan ahaaneysaa maxaa yeelay dadkeeda ayaan aqoon la xisaabtan oo magaca qoysku kala weyn yahay midka Qaran. Oo munaafaqqu u yahay Mu’min. Daacadkuna u yahay doqon iyo daciif. Oo Qodxo in loo dhigo ka jecel in xiriir loo goglo. Dad sida Soomaalida ah caalamka laguma hayo. Reer Xamar ayaa hore warkii dhameeyey oo yiri, “Geel maxaas indho-kuul ka kasaa?” Ilaahow dadkan caqliga u toosi!
Mohamud Yussuf Tifaftiraha Bogga Runta News
Duqowda Magaalooyinka Mareykanka oo Dowladdooda Ka Codsaday iney Furto Xawilaadda Soomaalida!
SEATTLE (June 22, 2015) – Waxa magaaalada San Francisco baaq culus ka soo saaray Duqowda magaalooyinka dalka Mareykanka kuwaasi oo madaxda dowladda Federalka ah ee Mareykanka ka codsaday iney xal u hesho arrinta murugsan ee xawilaadda taasi oo quudisa malaayiin dad ah oo ku nool dalka Soomaaliya iyo dalka geeska Afrika. Waxa ay Mayor-ada codsadeen in muwaadiniita ku abtirsada Soomaali ee ka shaqeysta dalkan loo oggolaado iney ehelladooda lacagaha u dirsadaan.
Bishii February, Bangiga Ganacsiga ee California ee loo yaqaano the Merchants Bank of California waxa uu xiray dhamaan xisaabihii Xawilaadaha Soomaalida ay lahaayeen kuwaasi ay ku adkaatay iney raacaan sharciga lacag dirista ee dalka Mareykanka. Tallaabadaa uu qaaday bangiga oo ah kii ugu dambeeyey waxa ay keentay iney nolosha ku sii adkaatay kummanaan Soomaali ah oo awalba la rafanayey quutal daruuriga.
Xeerka ay meel mariyeen Duqowda Magaalooyinka dalka Mareykanka waxad ka dheehan kartaa halkan Download Most Recent Classifieds.
, waxana hormuud ka ahaa labada Mayor ee Seattle Mayor Ed Murray iyo Mayor Betsy Hodges ee Minneapolis. Minneapolis iyo Seattle waxa ay kala yihiin magaalada koowaad iyo labaad ee Soomaalida Mareykanka ku nool yihiin.
“Sida ummadaha kale ee ku nool dalka Mareykanka, Somali-American families waxa ay rabaan iney dhaqaale ku tukaakuleeyaan dadkooda ay jecel yihiiin.” Ayuu yiri Ed Murray. “Qaxootigan oo nolol wanaagsan ka helay dalka Mareykanka waxa ay sameynayaan wax mid kasta oo innaga mida uu u sameyn lahaa qoyskiisa. Dowladda Federalka Mareykanka waxa iney waddo u hesho in dadkaasu dirsadaan lacagta xawilaadda ah”
“Minneapolis waxa ay ku faataa iney hoy u tahay dadka noocaa ah oo aad u tiro badan oo sidoo kale ah dad Soomaali oo nool oo kartina leh” ayey tiri Duqda Minneapolis, Betsy Hodges. “Iney awoodaan iney lacag u dirsadaan dadka gudaha dalka Soomaaliya jooga waxa ay keeneysaa iney kuwa ay dhiigga wadaagaan u suurto gasho nolosha lagama maarmaanka ah, waana inaannu taasi difaacnaa. Lacag boorso lagu qaado xal ma aha. Waxan si adag u codsanayaa in Bangiyadu la shaqeeyaan hey’adaha lacagta xawila ee Soomaaliyeed si dadka shaqada badan ee deggan Minneapolis u awoodaan iney gacan siiyaan qoysaskooda.”
In ka badan labo million oo Soomaali ah ayey noloshoodu ku xiran tahay lacagaha ka yimaada dibadda. Soomaaliya waxa soo gala qiyaas $1.3 billion oo xawilaad ah sannadkii taasi oo loo isticmaalo cunto, biyo, hoy, and waxbarasho. In la xiro xisaabahaasi ama akoonadaasi waxa sii dedejiyey dowlad la’aanta ka jirtay Soomaaliya taasi oo iyaduna sabab u noqotay inaaney jirin Bangiyo Ganacsi.
“Soomaaliya oo ah halka qof ka mida 3 qof uu cabi karo biyo la hubo caafimaadkooda, lacagta laga soo diro Mareykanka iyo dunida kale waxa ay u dhigantaa dakhliga ugu weyn ee dalka soo gala,” ayuu yiri Raymond C. Offenheiser, oo ah Madaxweynaha Oxfam America. “Lacagtani waxa ay ka caawini doontaa Soomaalida iney ku iibsadaan waxyaabaha asaasiga ah oo ay noloshooda u baahan tahay. Dowladda Mareykanka waa iney dhug deg-deg ah u yeelataa Soomaalida Mareykanka oo ah dad howlkar ah oo la halgamaya iney dadkooda ay jecel yihiin caawiyaan”
Waaxaha Arrimaha Dibadda iyo Maaliyadda weli ma soo saarin hab ku caawinaya Bangiyada gudaha iney lacagahaasi tagaan Soomaaliya, iyadoo isla markaana laga taxaddarayo nabadda dalka Mareykanka. Bishii dhoweyd Duqa magaalada Seattle, Mayor Ed Murray waxa uu la kulmay Xoghayaha Arrimaha Dibadda John Kerry waxana uu ka codsaday in ficil laga qaato arrinta murugsan ee Xawilaadda Soomaalida.
Tim Burgess Begins Campaign for Mayor of Seattle
(Seattle, Washington) Tim Burgess officially began his campaign Tuesday November 27 to become Seattle’s next Mayor when he filed disclosure Continue Reading Comments (0)
Runta oo Ciideysiisay Qaar ka Mida Caruurta Garoowe!
Waxa ugu fiican ood dadkaaga aad u qaban karto waa adigoo maskaxda wax ugu shuba, caloosha uga shuba ama wax huwiya oo qorraxda iyo Continue Reading Comments (0)
Soomaali Seddexdaa KOOXOOD Sidee Looga Soo Dhiciyaa?
Haddaadan indhaha waxba ka arag yey kula tahay inuu usha kuu qabto. Ma walaalkaa oo kula indho la’. Ma hooyadaa oo indho la’aanta da’ ku darsatay, Continue Reading Comments (0)
Kobci aqoontaada, words of wisdom, iyo bogga su’aalaha Islaamiga ah waa bogag uu curiyey Mubarak Hadi oo ka mida dhallinyarada maskaxda wanaagsan ee ku nool Seattle. Sawirkan cajiibka ah waxannu ka soo xadnay boggiisa facebook si aannu ula qeybsanno dadka is dhiibay ee noloshooda ka quustay iney wax bartaan. Mubarak boggagaani uu curiyey waxa ay inoo sheegayaan tilmaamo aad u qiimo badan oo laga tusaale qaadan karo. Qofku waa innuu ku xisaabtamaa waqtiga qaaliga ah ee maalin kasta cimrigiisa ka sii go’aya. Fadlan raadso aqoon oo weliba waddanka Mareykanka qofkii jooga uu nasiib u leeyahay in lacag lagu siiyo isagoo wax baranaya. Haddii kale ood afka meelaha taag taagto maalin kasta, marna aad isku luggoyso shaqo aan waxba kaaga kordheynin, haddow ha ilmeynin oo ha is qoomameynin. Kaashka yuusan ku sirin. Xisaabtan oo isu miisan shaqada aad qabaneyso oo is weydii lacagta ka sokow maxaa aqoon ah ee kaaga kordhaya, ama haddii shaqadaasi cimrigaaga ay soo gaabineyso oo adigoon da’deeda gaarin ay tahay mid bidaar iyo cirro kugu soo kordhineysa. Haddaad talo u baahan tahay la soo xiriir Mubarak Hadi ama Runta inkastoo aaney sahlaneyn si aad ula kulanto maxaa yeelay waqtigooda qaaliga ah af-leeris kuma lumiyaan.
Ciid Wanaagsan Mar Kasta Soomaalida Seattle!
Soomaalida ku nool Mareykanka waxa lagu amaanay in aaney si cabsi ku jirta ugu dabaal degin ciidahooda, una muujiyaan shicaarkooda diiniga ah. Cumar Xasan iyo qoyskiisa waxa ay maalintii ciidda ku tukadeen Masjidka Al Noor ee saaran waddada MLK Jr. Way. Salaadda Cumar halkaa ku tukaday waxa u dheereyd inuu dadka Muslimiinta ku guubaabiyey iney u codeeyaan qodobka 1240 ee wax u taray iskuulada gaarka ah, iyo iney sidoo kale ka hortagaan ansaxinta qodobka 74 ee banneyanaya waxa lagu sheegay “is-guursiga” dadka isku nooca ama jinisiga ah. Cumar waa aqoonyahan ay qalbigiisa ka buuxdo xishood iyo damiir Islaanimo iyo Soomaalinimo. Noociisa lagama helo bulshada Soomaaliyeed, balse su’aashu waxa ay tahay bulshadeenu ma qaddariyaan qof doonaya inuu wax la qabto.
Taariikhada Cumar iyo howlihii uu u soo qabtay bulshada waxanu ku soo bandhigi doonaa boggageena dambe. Ciidaha agagaarka Seattle waxa inta badan camira Soomaalida oo ah dadka ugu badan ee Muslim ah ama ka yimid qaaradda Africa.